I-R & D - Hengyi Electrical Co., Ltd.
Unyaka wama-20 Sihlala sihlola phambili ocwaningweni lomkhiqizo nekhwalithi yamandla entengo.umshini wethu omusha wokukhokhela amandla we-capacitor amandla wokukhiqiza amandla ngumkhiqizo osindisa amandla othole amalungelo obunikazi obuningi wombuso. Imikhiqizo yethu ithunyelwe eRussia, eTurkey, e-Italy, e-USA, eFrance, eJalimane, njll.
4 I-National Invention Patent
15 Amalungelo obunikazi bemodeli yokusetshenziswa
22 Amalungelo obunikazi okubukeka
11 I-Software Copyright
6 Ukuhlonishwa Kwebhizinisi
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-20, abantu baseHengyi bebelokhu behlola njalo phambili kwe-capacitor R & D nokukhiqiza. Ukumbozwa kwengxenye eyinhloko ye-capacitor kulawulwa yodwa futhi kuqinisekisiwe ukuthi kuzosetshenziswa kungakapheli amahora angama-72.
Ukuguga kokushisa okuphezulu
I-workshop yokuhlanza i-Capacitor
Ubuchwepheshe obuthathu bokulwa nopende bebhodi lesifunda
Kuphelile ukuguga komkhiqizo
Ukuhlolwa kwempilo yomkhiqizo